October 13, 2021 - Page2of2- Channel Lover
အနာဟောင်းများကို ၂ရက်၃ရက်နဲ့ အနာကျက်တဲ့ ငှက်ပျောစေး….
အနာဟောင်းများကို ၂ရက်၃ရက်နဲ့ အနာကျက်တဲ့ ငှက်ပျောစေး…. အနာကျက်တဲ့ငှက်ပျောစေး ငှက်ပျောစေး အသုံးဝင်ပုံ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ငုတ်ထိုး ခြေချော် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကာ သွေးထွက်သံယိုအနာတရဖြစ်တတ်ကြသည်က လူတိုင်းသဘာဝပင်ဖြစ်ပါ၏။ အချို့သောဒဏ်ရာ အနာတရဖြစ်ပါလျှင် ရုတ်တရပ်ဘာလုပ်ရမည်မသိ အခက်တွေ့တတ်ကြပါ၏ဆေးလည်းမသိ ဆေးလည်းမရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းတို့ဖြင့်ဝေးကွာပါလျှင် ငှက်ပျောပင်ကို သတိရကြပါ။ ငှက်ပျောပင်ကို ခုတ်လိုက်ပါ အစေးများ ထွက်လာပါမည်။ ထိုအစေးဖြင့် ဒဏ်ရာကို သုတ်လိမ်းပြီး အဝတ်စည်းထားလိုက်ပါ။သွေးတိတ်သွားပါမည်။ ၂ရက်၃ရက်ကြာလျင် အနာကိုဖြေကြည့်လိုက်ပါအံ့ဖွယ်အနာကျက်ပြီး ဒဏ်ရာပျောက်ကင်းနေမည်ကိုတွေ့ရပါမည်။ အမှတ်မထင် ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ပါမူ ငှက်ပျောပင်ကို သတိရကြပါစို့။ နက္ခတ္တရောင်ခြည်မဂ္ဂဇင်းအမှတ်၃၆၄ အနာကျက်တဲ့ငှက်ပျောစေး #Credit unicode အနာဟောငျးမြားကို ၂ရကျ၃ရကျနဲ့ အနာကကျြတဲ့ ငှကျပြောစေး…. အနာကကျြတဲ့ငှကျပြောစေး ငှကျပြောစေး အသုံးဝငျပုံ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ ငုတျထိုး ခွခြေျော ထိခိုကျဒဏျရာရကာ သှေးထှကျသံယိုအနာတရဖွဈတတျကွသညျက လူတိုငျးသဘာဝပငျဖွဈပါ၏။ အခြို့သောဒဏျရာ အနာတရဖွဈပါလြှငျ … Read more
အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ သတင်း SurachaiMintun(TCTF) ရွေ့ပြောင်းမြန်မာအလုပ်သမား(၄)ဦးအားပွဲစားမှ လူမိုက်ငှါးပြီ သေအောင်ရိုက်ခိုင်းပြီး ရေထဲပစ်ချ ဆုံးအောင်ကြည့်ပါနား ထောင်ပါအမျိုးတို့ ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများအသေချာကြည့်ကြပါ သင်္ခန်းစာရအောင်ပါ ဒီလိုတိုးတက်နေတဲ့ခောတ်ကာလမှာ အွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာအလုပ်ရှာပြီး အလုပ်လျှောက်သူများ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အနေကြာတဲ့သူတွေလည်း အခုလိုကြုံတွေ့ရတတ်တာမို့ ငွေကုန်အချိန်ကုန် အသတ်ခံရတဲ့အထိ နောက်ဆက်တွဲ အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့ရမည့်ဒုက္ခတွေကို အခုလိုအဖြစ်မျိုး မဖြစ်ရအောင်ကြိုတင်ပြီး သတိပေးသောအားဖြင့် အလုပ်သမားတွေလည်း ယခုဖော်ပြပါ အမှုနဲ့ဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ မကြုံရလေအောင် စဉ်းစားဆင်ချင်နိုင်အောင် အခုလိုတိုက်ရိုက်မေးမြန်းပြီး လူမှု့သတင်းမီဒီယာပေါ်တင်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ရက်စွဲတွေတော့မထည့်တော့ပါဘူး ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ သံအရာရှိသစ် ဦးအောင်ကိုဇော်နှင့် TCTF ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဥပဒေအကြံပေး ဦးစိုင်းအေးတို့မှသွားရောက်ကူညီပြီးအမှုဖွင့်ကာ အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုမရပါကနောက်ထပ် ထပ်မံပြီးအမှုကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အာဏာပိုင်ဌာနနောက်တခု သို့လွဲပြောင်းအမှုအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ် လက်ရှိရမည့်လုပ်အားခနှင့်နေရာထိုင်ခင်းကိုလည်း အစစအရာအားလုံးကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးခဲ့ပြီး အမှုအတွက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအားပေးစကား ပြောခဲ့ကြသော အလုပ်သမား သံအရာရှိနှင့်အတူ ဦးစိုင်းအေးအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ရိုက်ကူးသူ ဦးစိုင်းအေး တည်းဖြတ်သူ … Read more
၃ လသားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်တည်းရေမြောင်းထဲရှိ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုတွင်အိပ်စက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် နောက်ကွယ်က ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ်
၃လသားအရွယ် ကလေးတစ်ယောက်တည်းရေမြောင်းထဲရှိ ပိုက်လိုင်းတစ်ခုတွင်အိပ်စက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့သည့် နောက်ကွယ်က ကြေကွဲစရာဖြစ်ရပ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Lagunaပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သော အသက် ၄၀အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ရေမြောင်းထဲရှိ ပိုက်လိုင်းလုံးထဲတွင် အရုပ်လေးတစ်ရုပ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ရာ အနားသို့ရောက်သွားချိန်မှာတော့ အရုပ်မဟုတ်ပဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်သာ ဖြစ်နေကြောင်းကို အံ့အားသင့်ဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသားလည်း အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွင် လျှောက်ကြည့်ခဲ့သော်လည်း ကလေးမိဘကို မတွေ့ရှိသည့်အတွက် စိုးရိမ်စွာဖြင့် ပွေ့ချီကာ စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် မိခင်ဖြစ်သူ ပြန်လာချိန်တွင် အကြောင်းစုံမေးမြန်းကြည့်ခဲ့ရာ ကိုယ်ပိုင်နေစရာအိမ်မရှိသည့်အပြင် စားဝတ်နေရေးအတွက် လမ်းမပေါ်တွင် ပန်းကုံးလေးတွေ လိုက်ရောင်းရသည့်အတွက် ကလေးတစ်ဖက်နှင့်အဆင်မပြေ၍ တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။ အမျိုးသားလည်း သုံးလအရွယ်သာရှိသေးသည့် ကလေးကို ထိုသို့တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ခြင်းဖြင့် အလွန် အန္တရာယ်များကာ နောက်မလုပ်ရန်သတိပေးပြီး လိုအပ်သည်များကို ကူညီပေးသွားမည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ Credit unicode ၃လသားအရှယျ … Read more
နိုင်ငံတစ်ဝန်း ၉ နာရီ ၁၄ မိနစ်မှစပီး မီးတွေပျက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း ရန်ကုန်အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း System Break Down ဖြစ်၍ မီးပျက်နေ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရန်ကုန်အပါအဝင် နိုင်ငံတစ်ဝန်း System Break Down ဖြစ်၍ လျှပ်စစ်မီးများ ပြတ်တောက်နေကြောင်း စစ်ကိုင်းမြို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုများ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၁၄ မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှစတင်၍ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် စတင်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီး မီးပြန်လည် ရရှိမည့်အချိန်ကို မသိရှိသေးဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ “မဟာဓာတ်အားလိုင်း အပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်နားကဖြစ်လဲ မသိဘူးဗျ။ ဘယ်လောက်ကြာမလဲလည်း မသိပါဘူး။ စစ်ကိုင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးဖြစ်တာပါ” ဟု စစ်ကိုင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ … Read more
အသက် ၄၀ မတိုင်ခင် ပြုလုပ်သင့်သောအရာများ
အသကျ ၄၀ ဆိုတဲ့အရှယျမှာမှ ဘဝစတယျ….လို့ ပွောကွတာ ကွားဖူးမှာပါနျော။ အကျမငျကတော့ အသကျ ၄၀ ဆိုတဲ့အရှယျက တညျငွိမျသငျ့သလောကျတညျငွိမျနပွေီး ဘဝမှာလညျး အတှအေ့ကွုံတျောတျောမြားမြားရခဲ့ပွီးပွီလို့ ထငျပါတယျ။ ဘဝနဲ့ပတျသကျတဲ့ လူအမြိုးမြိုးကိုလညျး တှဆေုံ့ခဲ့ရပွီးပွီ၊ လုပျငနျးခှငျနဲ့ပတျသကျတဲ့အလုပျတျောတျောမြားမြားမှာလညျး ကငျြလညျခဲ့ပွီးပွီဖွဈမှာပါ။ အဲဒီမတိုငျမှီအခြိနျ အသကျ၄၀ ဆိုတဲ့အရှယျမှာ ပိုပွီး တညျငွိမျအောငျ ပွငျဆငျထားသငျ့နပေါပွီ။ အဲဒီ့တော့ အဲဒီ့အသကျအရှယျမှာ ပွငျဆငျထားသငျ့တာလေးတှေ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ ၁) စုငှပေမာဏ တဈခုရှိနသေငျ့ပါပွီ။အသကျ ၄၀မတိုငျခငျ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ကာလတှမှောကတညျးက ငှကွေေးနဲ့ပတျသကျပွီး ပုံမှနျစုငှတေဈခုထားပွီး စုဆောငျးထားသငျ့နပေါပွီ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ထိုအသကျအရှယျမှာ အလုပျကို အရမျးပွငျးထနျစှာ ကွိုးစားဖို့ထကျ သကျတောငျ့သကျသာရှိစှာ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးနိုငျဖို့က ပိုပွီးအရေးကွီးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ စုငှပေမာဏတဈခုရှိထားသငျ့နပေါပွီ။ ၂) မိသားစု ဘဝတဈခု တညျဆောကျပါ။အသကျ ၄၀မတိုငျခငျမှာ မိသားစုဘဝတဈခုကို ပိုငျဆိုငျသငျ့နပေါပွီ။ သားသမီးတှသေိုကျဝနျးစှာနဲ့ … Read more
ချောင်းဦး PDF ပါဗျ …. ….(ရုပ်သံ)
ပုလဲ PPDF မှ ဗိုလ်နဂါးလက်စွမ်းပြ (ရုပ်သံ)